NextMapping | Hadalka Dhacdooyinka
Waad ku mahadsan tahay doorka aad ka dooratay inaad la shaqeysid furaha hadalka Cheryl Cran xafladaada soo socota. Halkan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ugu diyaar garowdo inaad haysato Cheryl oo ah furaha hadalka ee kooxdaada. Waxaan sugeynaa inaan kaa caawino abuurista khibrad kulan aan caadi aheyn!
Eeg dhamaan fiidiyeyaasha
Soo dejiso Hagaheena Saadka Saadka
Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay # 1 Mustaqbalka Shaqada Saameyntiisa Onalytica, iyo qoraa buugaag 9 ah oo ay kujiraan daabacaadda labaad ee "NextMapping ™ - Ka-Fiirso, Navival iyo Abuur Mustaqbalka Shaqada" oo ay weheliso buuga shaqada wehelka.
NextMapping ™ waxaa loo sameeyay sidii shirkad ganacsi oo ganacsi u leh xallinta khibraddeeda iyo cilmi baaris ku saabsan mustaqbalka shaqada iyo hoggaanka loo baahan yahay in lagu raadiyo isbedelka goobta shaqada. Waa waqtigii aan la maqli lahayn oo keliya mustaqbalka laakiin loo adeegsan lahaa NextMapping ™ si halkaas loo tago! Teknolojiyadda goobta shaqada waa in loo adeegsadaa si loogu diyaariyo mustaqbalka iyada oo diiradda la saarayo sida tikniyoolajiyaddu ay kor ugu qaadi karto natiijooyinka dadka.
Sawirro daabacan iyo websaydh
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida Cheryl u habayn karto khudbad muhiim u ah dhacdadaada xigta nala soo xiriir maanta.